ထူထဲတဲ့ မျက်တောင်လေးတွေကို ၃၆နာရီကြာဖန်တီးပေးထားနိုင်မယ့် BADgal BANG! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ထူထဲတဲ့ မျက်တောင်လေးတွေကို ၃၆နာရီကြာဖန်တီးပေးထားနိုင်မယ့် BADgal BANG!
Benefit San Francisco ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ BADgal BANG Volumizing Mascara ဟာဆိုရင် ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်းမှာ ရောင်းအားကောင်းပြီးလူကြိုက်များတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် Mascara လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ တခြား Mascara တွေနဲ့ယှဉ်လိုက်တဲ့အခါမှာ လူအများ ဒီ Mascara လေးကိုပဲရွေးချယ်တဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ ၃၆နာရီကြာထူထဲတဲ့ မျက်ဝန်းလေးကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပြီး Waterproof လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ Gravity-defying formula နဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာ အခဲလိုက်ထူထူထဲထဲကြီးမျိုးမဖြစ်စေပဲ မျက်တောင်တစ်မွှေးချင်းဆီကို နက်မှောင်သန်စွမ်းအောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကော့ညွှန့်ထားတဲ့ မျက်တောင်မွှေးလေးတွေ ပြေဆင်းလာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနဲ့ဖော်စပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကော့တဲ့အကြိမ်ရေများလာတာနဲ့အမျှ ပိုမိုထူထည်းကော့ညွှန့်တဲ့ မျက်တောင်လေးကိုပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။ ဖန်တီးထားတဲ့ Brush Design ဟာဆိုရင် မျက်တောင်အရင်းမှအဖျားထိ သာမက မျက်ဝန်းရဲ့ထောင့်တွေအထိပါ လွယ်လွယ်ကူကူဆွဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပျိုမေတို့နှစ်ခြိုက်မယ့် ပစ္စည်းလေးဖြစ်မှာ အသေအချာပါပဲ။ မျက်တောင်မွှေးလေးတွေကို ပိုမိုထူထဲသန်မာလာစေဖို့ရန်အတွက် ProVitamin B5 နဲ့ရောစပ်ဖန်တီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် မျက်တောင်မွှေးလေးတွေကို ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 8.5g နဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီး ခရီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ လွယ်ကူစွာသယ်ယူသွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်း 4g size ကိုလည်းထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
မျက်တောင်တုတောင်မလိုဘဲ ထူထဲတဲ့မျက်ဝန်းလေးကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်မျက်တောင်သာမက အောက်မျက်တောင်လေးတွေကိုပါကော့ညွှတ်ပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ စျေးနှုန်းအားဖြင့် ပုံမှန်ဆိုဒ်ကို ၂၄ ဒေါ်လာနဲ့ ခရီးဆောင်ဆိုဒ်အသေးကိုတော့ ၁၂ ဒေါ်လာကျသင့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးအာမခံချက်လည်းအပြည့်အဝပေးထားတာကြောင့် ပျိုမေတို့အနေနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်။
Image Source: www.benefitcosmetics.com